သေချာမှုထဲက မရေရာသော အလွမ်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » သေချာမှုထဲက မရေရာသော အလွမ်း	8
သေချာမှုထဲက မရေရာသော အလွမ်း
Posted by Kabyar Phyu Phyu on Mar 20, 2016 in Creative Writing, My Dear Diary | 8 comments
○ ၈နှစ်ကျော်တွဲခဲ့တဲ့လက်တွေရဲ့ နွေးထွေးမှုတွေက ခုချိန်မှာ အေးစက်သွားတာ သူမရဲ့ချွဲ့နွဲ့တဲ့ အသံလေး တစ်ခုတည်းကြောင့်လား မောင်။
ကျွန်မတို့ရဲ့ သံယောဇဉ်တွေက ကမ်းစပ်က သဲတွေလို အလွယ်တကူ တိုက်စားခြင်းခံခဲ့ရတာလား။
○ မောင်ကတော့ မေ့နိုင်ပေမဲ့ ကျွန်မအတွက်တော့ အထိနာလှတယ်။
ကျွန်မလည်း မောင့်လို မေ့နိုင်ချင်တယ်။ တခါတခါ မောင်ကို ယောင်ရမ်းတမ်းတမိလို့ ကျခဲ့တဲ့မျက်ရည်တွေအတွက် ကျွန်မနှလုံးသားက သက်သေတည်တယ်။
မောင်နဲ့ဆုံနိုင်ခွင့်ကို အိပ်မက်ထဲထည့်မက်ချင်ရင်တောင် ကျွန်မအိပ်မက်တွေက ကယောင်ချောက်ချားနိုင်လွန်းတယ်။
○ အချစ်တွေက ထပ်တူမညီခဲ့လေသလား … ကျွန်မက မမူနွဲ့ခဲ့လို့လား။ မောင် ကျွန်မဘဝကို ခါးသက်စေခဲ့တယ်။
○ မောင့်ကို ပြင်းပြင်းရှရှလွမ်းနေရတာကိုက နာကျင်ခံပြင်းစရာကောင်းတယ်။ အလွမ်းတွေကလည်း တဖက်သတ်ဆန်လွန်းတယ်။
ကျွန်မလည်း မမှားပါပဲနဲ့ ကံတရားရဲ့အမှားက ရူးကြောင်ကြောင်နိုင်တယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မ မောင့်ကို သတိရနေတုန်းပဲ။
○ မောင့်မှာ ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုရင် ကျွန်မမှာလည်း လွမ်းနေခွင့်တော့ ရှိတယ်မလား မောင်။ ခေတ်သစ်မိန်းမတစ်ယောက်အတွက် အချစ်က မရှားပေမဲ့ သစ္စာတရားကတော့ ရှားပါးတယ်။
ကျွန်မရဲ့သစ္စာတရားကတော့ မောင့်အတွက် အသုံးမဝင်ခဲ့ဘူး။
○ အခုထိ အချစ်ရဲ့ဖြားယောင်းမှုအောက်မှာ မောင့်ကို လူမသိသူမသိ လွမ်းနေရတာကိုက ကျွန်မရဲ့ ယိုင်နဲ့နဲ့ မျှော့်လင့်ချက်ပါ။
○ တစ်ကြိမ်တခါလောက်တော့ မောင့်ကိုပြန်တွေ့ချင်သေးတယ်။
မောင့်ကို ချစ်နေတုန်းမို့ လွမ်းနေတာလား …. မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့မာန ထိရှသွားလို့ ခံပြင်းနေတာလား … ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေချာချင်ရုံသက်သက်ပါ။
kai says: သေချာချင်ယုံသက်သက်နဲ့တော့ မရေရာတာကို မရင်းနဲ့ပေါ့…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ခင်ဇော် says: အဲ။
ဒီလိုအချိန်ဆိုဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ ငြိမ်နေလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါ။
ရေးထားတာလေးကတော့ ခံစားချက်ကို ဖော်ပြနိုင်ပါတယ် ခည။
uncle gyi says: မရေရာတာတွေမျှော်လင့်နေရင်
လုံမလေးမွန်မွန် says: ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်ကို ပြန်ချစ်မိသွားရင် အရာရာဟာ အိပ်မက်လို ပြန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်. . .
Kabyar Phyu Phyu says: အဟီး .. စိတ်ကူးယဉ်ပြီး ရေးထားတာပါလို့ … Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12176
Thint Aye Yeik says: ချစ်ရင်ရအောင်ယူ(ခွက်ဒစ် သူကြီး)
မုန်းရင် သေအောင်သတ် (ပုံ ကျနော်)
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .အချစ်ဆိုတာ..လျှိူ့ဝှက်ချက်တစ်ခုပါ ♫♀♪♫♀
Foolish Girl says: ဟိုက်ရှားဘား တကယ်ထိတာ
…အချစ်တွေက ထပ်တူမညီခဲ့လေသလား … ကျွန်မက မမူနွဲ့ခဲ့လို့လား။ မောင် ကျွန်မဘဝကို ခါးသက်စေခဲ့တယ်။
…ကျွန်မရဲ့သစ္စာတရားကတော့ မောင့်အတွက် အသုံးမဝင်ခဲ့ဘူး။
…မောင့်ကို ချစ်နေတုန်းမို့ လွမ်းနေတာလား …. မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့မာန ထိရှသွားလို့ ခံပြင်းနေတာလား …